प्रधानमन्त्रीको उपचार प्रक्रिया सम्पन्न, शुक्रबार फर्कंदै - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
प्रधानमन्त्रीको उपचार प्रक्रिया सम्पन्न, शुक्रबार फर्कंदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचार बुधबार पूरा भएको छ । सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा १२ दिनको नियमित स्वास्थ्य उपचार पूरा भएको प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्माले बताएका छन् । उपचार सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शुक्रबार थाई एयरवेजको नियमित उडानबाट दिउँसो साढे १२ बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
५ भदौमा उपचारको सिलसिलामा सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीको ६ गतेदेखि प्लाज्मा फेरेसिस सुरु भएको थियो । यो मिर्गौलाको एन्टिबडी हटाउने विधि हो । प्लाज्मा फेरेसिस सात चरणसम्म गरिन्छ । बुधबार सातौँ चरण पूरा भएसँगै उपचार सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले बताए । ‘उपचार सकिएर उहाँले स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘शुक्रबार अपराह्न स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक दिलीप शर्मा भन्छन्, ‘उपचार सकियो, ठीक भए–नभएको अहिल्यै यकिन हुँदैन’ सातौँ चरणको प्लाज्मा फेरेसिस सकिएको छ । अहिलेसम्म उहाँका रिपोर्ट ठीक छन् । उहाँ स्वस्थ भएर शुक्रबार फर्किंदै हुनुहुन्छ । तर, प्लाज्मा फेरेरिसले ठीक भए–नभएको यकिन अहिल्यै हुँदैन । त्यसले काम गरे–नगरेको केही दिनपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।
रिमाल फर्किए, गौतम सिंगापुर
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थामा अनुकूल सुधार भएपछि उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र निजी चिकित्सक डा। दिलीप शर्मा बुधबार स्वदेश फर्किएका छन् । रिमाल र शर्मा फर्किएलगत्तै नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सिंगापुर पुगेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा। दिव्या सिंह भने मंगलबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । पौडेल र गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँगै शुक्रबार फर्किनेछन् ।
‘मंगलबारसम्म नजाने भन्ने नै थियो, टिकट कन्फर्म भइसकेको पनि थिएन,’ गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बुधबार मात्र उहाँले जाने निर्णय गर्नुभएको हो ।’
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम र पौडेलबाट पछिल्लो सचिवालय बैठकबाट भएको निर्णय, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे विस्तृत परामर्शसमेत गर्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै सिंगापुरमा श्रीमती राधिका शाक्य, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, अर्का निजी चिकित्सक डा. दिलीप सिंह छन् ।
यसअघि १८ भदौमा सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री सोही अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर २७ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।